Sida loo aqoonsado nooca ion ee soosaarayaasha iyo alaableyda polyacrylamide | Obo
Warshadaha Daaweynta Biyaha
Sida loo aqoonsado nooca ion ee polyacrylamide
Marka loo eego nooca ion, polyacrylamide waxaa loo qaybin karaa: anionic polyacrylamide ,cationic polyacrylamide' iyo non-ionic polyacrylamide.
Sidee soo saaraha polyacrylamide u aqoonsadaa nooca ion polyacrylamide:
Soosaarayaasha Polyacrylamide waxay ku qalabaysan yihiin sheybaarro xirfadlayaal ah. Marka lagu daro baaritaanka tilmaamayaasha farsamada ee alaabada maalinlaha ah, shaqada sheybaarka sidoo kale waxay u baahan tahay in lagu baaro shaybaarada dibada. Caadi ahaan, marka la helo muunad dibedda ah, nooca ion ee sheyga waa in marka hore la ogaadaa. Marka sidee loo kala saaraa nooca ion? Jawaabtu waa: tilmaamayaasha farsamo ee lagu ogaanayo shaybaarrada shisheeye. Anionic polyacrylamide iyo non-ionic polyacrylamide waxaa lagu kala saaraa iyadoo la ogaanayo heerka hydrolysis-ka. Heerka hydrolysis ee anionic polyacrylamide waa kudhowaad 25, iyo heerka hydrolysis ee non-ionic polyacrylamide waa kudhowaad 5. Cationic polyacrylamide waxaa lagu kala saaraa iyadoo la ogaanayo heerka ion, iyo heerka ion ee alaabada budada qalalan badanaa way isbadashaa inta udhaxeysa 10-60.
Sida loo aqoonsado nooca ion polyacrylamide iyada oo loo marayo tijaabo fudud:
Sidee loo kala saaraa nooca ion ee polyacrylamide markay shaqaaluhu ku jiraan goobta iibka ka dib ama aysan haysan qalabka tijaabada ah? Marka hore, waxaan u baahanahay inaan helno shaybaarro anionic polyacrylamide iyo cationic polyacrylamide, oo aan u kala dirno labadan shey si gooni ah si loo isticmaalo. Kadibna milmi sheyga u baahan in la ogaado nooca ion, oo ku kala saar falcelinta yin iyo yang. Ku shub xalka badeecadda polyacrylamide anionic-ga ah xalka sheyga si loo tijaabiyo. Haddii xaddi badan oo flocs cad soo muuqdaan, waxay ka dhigan tahay in muunadda la tijaabiyay ay tahay cationic polyacrylamide. Haddii aysan jirin wax falcelin ah, waxay ka dhigan tahay inay tahay mid aan ionic ama anionic ahayn. Kadibna ku cadee xalka polyacrylamide xalka, qadar yar oo flocs ah ayaa tilmaamaya in sheyga la tijaabiyay uu yahay non-ionic polyacrylamide, tiro badan oo flocs ahina waxay muujinayaan in muunada la baaray ay tahay polyacrylamide anionic.
Muhiimadda aqoonsashada nooca ion polyacrylamide:
Marka aadan garanaynin badeecada loo isticmaalo daadinta goobta, aqoonsashada nooca ion polyacrylamide waxay ka caawin kartaa dadka isticmaala inay si dhakhso leh u baaraan moodooyinka oo ay helaan alaabooyin u dhigma biyaha qashinka goobta si deg deg ah.
Baro inaad aqoonsato nooca ion polyacrylamide, si dadka isticmaala ay sifiican u fahmaan badeecada, ugu isticmaalaan alaabta sifooyinka wanaagsan ee alaabta, ka feejignaadaan, iskana ilaali alaab-qeybiyeyaasha xun ee khiyaaneeya macaamiisha.
805Room, No.13, B Zone, Wanda guri nagaadi, Qingdao, Gobolka Shandong
Doorka flocculant ee daaweynta bullaacadaha
Faahfaahinta isticmaalka polyacrylamide ee t ...
Codsiga Polyelectrolyte ee Degmada ...
Codsiga Polyacrylamide ee macdanta
Sidee loo aqoonsadaa nooca ion ee polyacryl ...
Right Xuquuqda daabacaadda 2011-2020 Kiimikada Oubo Dhammaan Xuquuqda Waxay Leedahay.